Niala ny minisitry ny Vola : Hisokatra ny asa fampandrosoana -
AccueilRaharaham-pirenenaNiala ny minisitry ny Vola : Hisokatra ny asa fampandrosoana
Nanao valan-dresaka tetsy amin’ny Carlton Madagascar omaly maraina ny minisitry ny Vola teo aloha, Gervais Rakotoarimanana rehefa nitantana izany ministera izany nandritra ny roa taona sy tapany. Nisento tokana teo anatrehan’izany ireo olom-boafidy isan-tsokajiny avy (solombavambahoaka, loholona, ben’ny tanàna, lehiben’ny Faritra, sns) fa tena hisokatra tanteraka any amin’ny asa fampandrosoana nilokalokan’ny fitondram-panjakana amin’izay ny firenena sy ny isam-paritra. Ity minisitry ny Vola teo aloha, Gervais Rakotoarimanana ity tokoa mantsy no sakana tamin’izany, tsy araka ny fanambarana nataony teo anatrehan’ny mpanao gazety.
Noporofoin’ny tantara fa tsy nitondra fampandrosoana ho an’i Madagasikara mihitsy ny fiaraha-miasa tamin’ireo mpamatsy vola mahazatra, 57taona aty aorian’ny nahazoana ny fahaleovantena, mbola anaty fahantrana lalina hatrany ny Malagasy ary izany indrindra no antony nahatonga ny filoha Hery Rajaonarimampianina nikaroka lalam-baovao tany amin’ireo mpamatsy vola hafa, raha tsy hiresaka afa-tsy i Sina, izay tena hita fa manana fahavononana ary efa naneho izany tany amin’ireo firenena Afrikana maro.
Tsy dia ilay fampandrosoana araka ny resaka nataony tetsy amin’ny Carlton loatra no nataon’ny minisitry ny Vola, Gervais Rakotoarimanana, laharam-pahamehana nandritra izay roa taona izay fa ny fanompoana ireo mpamatsy vola mahazatra tsy nahitan’ny firenena tombontsoa. Io fametrahan’ny Filoha fiaraha-miasa amin’ireo mpamatsy vola hafa ireo no antony tokana nahatonga ny tsy fitoviam-pijery araka ny nambarany omaly tetsy amin’i Carlton. Ny fampandrosoana ny firenena, ny famoahana ny vahoaka Malagasy ao anatin’izao fahantrana navelan’ny fitondrana nifandimby izao no laharam-pahamehana ho an’ny Filoham-pirenena fa tsy fanompoana ireo mpamatsy vola mahazatra izay efa hita sy azo tsapain-tanana fa tsy nitondra tombontsoa ho an’i Madagasikara sy ny vahoaka Malagasy.